Umhwamuko wamanzi: izici, ukusetshenziswa nokubaluleka | Isimo Sezulu Senethiwekhi
El umusi wamanzi ayisilutho ngaphandle kwesimo somoya wamanzi uma usudlulile wasuka esimweni soketshezi waya esimweni segesi. Ukuze umhwamuko wenzeke, kufanele uvezwe ekushiseni okusondele lapho kubila khona. Le gesi ibalulekile kumjikelezo we-hydrological, ukwakheka kwempilo nokufudumala komhlaba.
Ngakho-ke, sizohlaziya ngokujulile ukuthi umhwamuko wamanzi, izici zawo nokubaluleka kwawo.
2 Ukwakheka komphunga wamanzi
3 Ukusetshenziswa komhwamuko wamanzi
Akuyona into edlula isimo samanzi lapho ihlukanisa izinguquko zisuka kulesi simo samanzi ziye esimweni segesi. Lo mvutha awunambala futhi awunaphunga, yize uvame ukuthola ukubukeka okumhlophe futhi okunamafu lapho kufakwa amaconsi amancane amanzi asesimweni soketshezi. Umhwamuko wamanzi nawo kungehlisa ukubonakala kuye ngobuningi bayo nokuthi ukuphi. Isibonelo, siyabona ukuthi umhwamuko wamanzi ungabonakala kahle lapho siphuma eshaweni futhi sivale amawindi endlu yangasese. Yilapho umhwamuko wamanzi uqoqeka futhi uphenduke uketshezi njengoba unamathela ezindongeni.
Ngokwemvelo, umusi ukhiqizwa lapho amanzi angaphansi komhlaba efudunyezwa ngezinqubo ezithile zentaba-mlilo. Lezi zinqubo zentaba-mlilo ziholela emithonjeni eshisayo, amagiza, ama-fumaroles, nezinye izinhlobo zezintaba-mlilo. Ama-geyser awuhlobo olukhethekile lwentwasahlobo eshisayo. I-steam ingabuye ikhiqizwe ngokufakelwa ngezinhlelo zobuchwepheshe ezifana nama-boilers fuel fossil kanye nama-reactor enyukliya. Ngale ndlela, siyakwazi lokho umusi wamanzi ungumthombo obalulekile wamandla embonini. Futhi ukuthi iningi lezinqubo zokwakheka kokukhiqizwa kukagesi zibhekela amandla omphunga wamanzi okuhambisa imishini yokuphehla ugesi.
Ingabonakala ngosuku lomswakama ophakeme, enkungwini ekhona ngesikhathi sokusa noma lapho imvelo ibanda futhi umoya ungowesithupha ngomlomo. Umoya osemlonyeni uqukethe umswakama namanzi okunxephezelwa ngokuhlangana nomoya obandayo.
Ukwakheka komphunga wamanzi
Ake sibheke ukuthi iyiphi inqubo eyinhloko ekhiqizwa umusi wamanzi. Ukubilisa kwamanzi kuyindlela ebonakalayo lapho le nto iguquka isuka ketshezi iye esimweni segesi njengomphumela wokuchayeka isikhathi eside ekushiseni okukhulu. Ukushisa okubilayo kwamanzi kungu-100 degrees. Kuku kula mazinga okushisa lapho amanzi aqala khona ukubila. Kodwa-ke, amanzi akudingeki aphile ukuze kube khona umhwamuko wamanzi.
Lapho uketshezi selufinyelele lapho kubila khona, lumunca ukushisa ukuze kuguqule uketshezi lube umusi, kepha izinga lokushisa kwalo alisakhuphuki. Wonke amanzi awuketshezi azogcina eshintsha abe yisitimu kuze kuphele konke uketshezi lwamanzi. Le nqubo siyibona kalula uma sibilisa amanzi ngembiza. Kumele futhi sazi ukuthi ukushisa kwamanzi abilayo kuncike kwingcindezi leyo nto efakwa kuyo. Isibonelo, kumpheki opheka ingcindezi ukupheka kokudla kwenzeka ngokushesha kunikezwe ingcindezi eyenziwe yibhodwe uqobo, izinga lokushisa lamanzi elibilayo liphansi.
Ukusetshenziswa komhwamuko wamanzi
Njengoba ungalindela, umhwamuko unokusetshenziswa okuhlukahlukene ezindaweni eziningi. Ake sibone ukuthi konke lokhu kusetshenziswa kuyini:
Hlanza ukudla: umusi wamanzi usetshenziselwa ukuqeda ama-microorganisms akhona ekudleni. Iningi lama-microorganism lifa lapho livezwe amazinga okushisa aphezulu. Ngalesi sizathu, umusi usetshenziselwa ukuvala amanzi noma izinto ezithile ezifana nezindlu ezisetshenziselwa ukukhokhela ukulahleka.
Ukusebenza kwenjini: Kunezinjini eziningi ezisebenza ngomlilo wamandla okubasa aguqula amandla ashisayo enani elithile lamanzi abe amandla kagesi. Zisebenza kanjena izinjini zesitimu.
Yenza i-Atomize: i-atomizing ayiyona into yokuhlukanisa izingxenye ezithile ezincane. Kuyinqubo evumela ukuthi into ethile ihlukaniswe izingxenye ezincane kakhulu. Ungasebenzisa futhi indlela ye-artifact evumela ukuthi uketshezi lusabalale ngokuveza amaconsi amancane kakhulu njenge-spray.
Hlanza: amanzi yiwona kuphela. Ngamanzi ungahlanza zonke izinhlobo zezinto. Umusi ungasetshenziselwa nokuhlanza. Ngamadivayisi asebenzisa ubuchwepheshe be-steam obucindezelweyo, ivumela ukukhulisa amandla futhi ihlanze wonke amabala anzima kakhulu njengalawo aqoqana kukhaphethi, ifenisha noma okokugqoka.
Ukuhanjiswa: Indlela yokupheka umusi inconywa kakhulu kukho konke ukudla okunempilo ngoba ivumela ukugcina amavithamini, izakhamzimba noketshezi lokudla.
Hlanganisa: imishini eminingi yokuthambisa ikwazi ukwenza ngcono izimo zezemvelo ngokwandisa umswakama ohlobene. Kunezinhlobo eziningi zama-humidifiers kuya ngokuthi ayahwamuka yini amanzi e-ultrasound noma lawo awenza ngokushisa. Lezi zokugcina zithandwa kakhulu ukuzisebenzisa ebusika njengoba futhi zandisa izinga lokushisa elincane kancane.
Njengoba sishilo ekuqaleni kwendatshana, umhwamuko wamanzi ubaluleke kakhulu emvelweni. Ukuba khona kwayo emoyeni kungenye yezinto ezifanele kakhulu. Futhi ukuthi ingxenye ebalulekile yomjikelezo we-hydrological itholakala ngobuningi obuhlukahlukene. Ukuhlungwa okujwayelekile emkhathini kungamaphesenti ama-3%. Ezindaweni ezomile noma ezibandayo kakhulu ezifana nezigxobo, inani lokuhlushwa liphansi.
Yize kungabonakali ngamehlo, ngosuku olucacile kukhona ubukhona bomphunga wamanzi. Ngaphandle kokuthi njengoba kuyigesi engenambala noma iphunga, ayiqondakali ngqo ngezinzwa, ngokungafani namafu akhiwe ngamaconsi amanzi ketshezi ngakho-ke angabonakala. Ungugesi wokushisa okugcwala kakhulu emkhathini futhi unamandla kunawo wonke ngenxa yesakhiwo sawo samakhemikhali. Ukufudumala noma iplanethi, lapho umhwamuko wamanzi wawuningi emoyeni njengoba izinga lokuhwamuka kolwandle, amachibi neminye imizimba yamanzi emhlabeni landa.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi mayelana nomphunga wamanzi nezici zawo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Umusi wamanzi
Iminyaka emincane yeqhwa